Micheal Rubin: “Caalamku wax buu ka baran karaa sidii Somaliland uga guulaysatay maleeshiyaadka” | Aftahan News
Micheal Rubin: “Caalamku wax buu ka baran karaa sidii Somaliland uga guulaysatay maleeshiyaadka”
Hargeysa (Aftahannews)- Aqoonyahan Micheal Rubin oo ah Xeeldheere Millatari oo Maraykan ah ayaa warbixin uu maanta ku daabacay warsideyaasha caalamiga ah wuxuu ciwaan uga dhigay “Caalamku wax buu ka baran karaa sidii Somaliland uga Guulaysatay Maleeshiyaadka.”
Mr. Rubin Wuxuu warbixintan ku faalleeyey sida Soomaaliya oo Dawladda Maraykanku ay ku taageerayso sannadkan $900 oo Milyan oo Doolar aanay haddana waxba uga qaban dhinaca Ammaanka dalkeeda, taasina ay Maraykanka ku tahay tacab khasaar. Waxaanu xusay in Soomaaliya ay ku guulaysatay horyaalka dalka ugu musuqmaasuqa badan Adduunka oo ay xataa ka sii liidato dalalka Yemen, Waqooyiga Kuuriya iyo Venezuela.
Wakaallada Wararka Somaliland (SOLNA) oo faallada Mr. Micheal Rubin ka soo xigatay Warsidaha Foreign Policy, ayuu ku sheegay in Somaliland ay miisaaniyaddeeda oo dhan $350 Milyan oo Doolar ay Saddex meeloodow meel geliso Ammaanka iyo Gaashaan-dhigga.
Mr. Rubin wuxuu xusay inuu soo bandhigay siday Maraykanka lagama maarmaanka ugu tahay Jamhuuriyadda Somaliland oo ah dal aan la aqoonsan oo uu socdaal ku tagay bishii hore.
Waxa kaloo uu naqdiyey Safiirka Marayanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamamoto oo uu xusay inaanu iman Somaliland, isla markaana dhaqaalaha loogu yabooho Soomaalida uu doonayo in lagu isticmaalo Soomaaliya oo kaliya, waxaanu tallabadaas ku sifeeyey mid ka hor imanaysa siyaasadda Madaxweyne Donald Trump ee ku wajahan Afrika.
Mr. Micheal Rubin wuxuu intaas ku daray in Dawladda Maraykanku ay lacag xad dhaaf ah ku bixiso ka hortagga maleeshiyaadka caalamka ka jira, balse wax aad u yari ka midho dhalaan dedaalkaas, waxaanu qiray in Somaliland ay maleeshiyaadkeedii gobollada oo dhan ay ku guulaysatay inay iskugu geyso hal ciidan qaran, waxaanu caddeeyey in hannaankii ay u maareysay Maleeshiyaadku ay cashar u noqon karto meelo badan oo caalamka ah.
Source: Wakaalada Wararka Somaliland Ee Solna